Afaka manatsara ny fiasan'ny lahy tokoa ve ny Peptides Oyster?
1. Ny fomba fijerin'ny Oyster
2. Inona no atao hoe Peptide Oyster?
3. Fampiasa Oyster Peptide ary tombony
4. Inona avy ny tombony azo amin'ny peptide Oyster raha ampitahaina amin'ny vokatra fampivoarana ara-pananahana hafa?
5. Ahoana no maka ny vovobony peptide Oyster? Dosage peptide Oyster?
7. fampiharana Oyster Peptide Powder?
8. Teny farany
Ny fomba fijerin'ny Oyster
oitira, biby an-dranomasina izay loharano malaza vovo-katsaka fararano, dia fahafinaretana ho an'ny olona maro am-polony taona maro. Afaka mihinana azy mofomamy na masaka. Na inona na inona safidinao dia ny hena noana dia manome sakafo mahavelona anao. Ny otrikaina dia ahitana proteinina, tavy mahasalama, mineraly ary koa otrikaina.
Miampy iray hafa amin'ity hena ity dia ambany ny kaloria.
Betsaka ny vokatra azo alaina amin'ny henan'isty, peptide oôzôla amin'ny iray amin'izy ireo. Amin'ity famerenana ity, dia hifantoka amin'ny peptides oyster bioactive sy ny fiantraikany amin'ny fiasan'ny lahy isika, miaraka amin'ny tombontsoa hafa.
Inona no atao hoe Peptide Oyster?
Ozika peptide dia famenon-tsakafo voajanahary azo avy amin'ny proteinina hena amin'ny alàlan'ny biôtôlôjia amin'ny dingana maro. Ny peptide dia manan-karena amin'ny zinc, calcium, taurine, ary koa ny otrikaina A, B1, B2, B5, C, D ary E. Noho izany, dia azo ampiasaina ho sakafo ara-pahasalamana na sakafo ilaina. Manana tombony ara-pahasalamana marobe eo amin'ny olona, ​​indrindra ny lehilahy manana olana ara-pahasalamana ara-pahasalamana.
Ny peptides Oyster dia manana potency biolojika avo kokoa raha oharina amin'ireo vokatra oyster mahazatra. Ankoatr'izany, ny peptide oyster manana asa ara-batana lehibe kokoa. Tsara kokoa, tsy toy ny vokatra Ozika mahazatra, vovoka peptide oy manana tsiro mahafinaritra ary tsy manana fofona manitra.
Ny fiasana Oyster Peptide sy ny tombony
Oyster peptide dia manana fiasa sy tombontsoa manaraka:
Fanovoanana ny atiny
Ny taurine omen'ny peptide oyster dia afaka manatsara ny mombamomba ny afisy ao anaty olona iray. Ankoatr'izay, ny turon-dranomandry dia afaka misoroka ny fitrandrahana tsy mitongilana na manafoana ny tavy mitombo ao anaty atiny. Samy miasa ny atiny roa amin'ny asany.
Fanatsarana ny fiasa ara-pananahana
Ny peptide oyster dia manan-karena amin'ny arginine, ary ny singa Zinc, izay zava-dehibe indrindra amin'ny fahasalamana ara-pananahana ataon'ny tsirairay. Manampy amin'ny famokarana hormonina ara-pananahana izy io, anisan'izany ny progesterone, testosterone ary estrogen.
Manohana ny hatsarany
Rehefa mandray ny vovony peptide oy ianao matetika dia ho hitanao fa ho lasa tsara tarehy kokoa ianao na mihatsaravelatsihy. Izany dia satria manome sakafo ny vatanao manome lanja ny metabolin'ny hoditrao izy, manome fahasalamana sy hidradradradra tsara.
Ankoatr'izay, ity vovony voajanahary ity dia misy singa manentana ny fitrandrahana melanin amin'ny hoditra. Vokatr'izany dia mihatsara ny feonao hoditra ary mihalehibe. Ho fanampin'izany, ny ioda sy ny tryptophan ao anaty peptide dia afaka manjary mainty kokoa ny volonao, noho izany dia tsara tarehy kokoa.
Ny fahasalaman'ny rafitra fiarovana anao dia ilaina amin'ny fahasalamanao satria io no miaro ny vatanao amin'ny aretina sy aretina isan-karazany. Zinc dia anisan'ireo singa manan-danja izay ilain'ny rafitra fiarovana anao amin'ny sehatry ny asany.
Soa ihany, ny peptide oyster dia manome ny vatanao amin'ny habetsaky ny zina marina izay ilain'ny rafi-hery fiarovana dia manohy mandeha ary mametraka otrikaretina sy bakteria mampidi-doza ao anaty rano. Ankoatr'izay, ny peptide dia mandrisika ny famokarana ny thymulin amin'ny ny glandosa thymus. Ny famokarana thymulin fanatsarana dia mitarika ny fanarahana ny sela finday T-cell sy T4 mpanampy, ka mitondra hery fanefitra matanjaka kokoa.
Ny sasany amin'ny aretina sy ny toe-pahasalamana azonao sorohina amin'ny alàlan'ny maka anao peptide oyster ahitana:
Aretina amin'ny ôtrika
Misoroka ny fanimbana maimaim-poana
Ny sisan-tsimoka, anisan'izany ny peptides, dia misy antioxidants miaro ny sela sy ny taolam-paty tsindrin-tsakafo.
Mihena ny harerahana
Ny peptide Oyster koa dia misy asidra amine, izay ankoatry ny fanatsarana ny fiasan'ny atiny, dia mety hanakana ny fiangonan'ny asidra laktika. Ankoatr'izay, ny asidra manampy amin'ny fanampiana ara-batana sy ara-tsaina. Manampy olona hatanjaka bebe kokoa izy io ary hanana saina mazava kokoa sy maharitra kokoa aorian'ny toe-javatra mahasosotra na aretina.
Ny peptide Oyster dia tombontsoa ho an'ny olona
Ny lehilahy manana olana ara-pananahana dia afaka mandray soa betsaka amin'ny peptide an'ny oyster. Anisan'izany ny lehilahy tsy mahazo miasa erectile, tsy mahavita tena, prostaty lavitra na hypoplasia ara-pananahana, ankoatry ny aretina sy ny lehilahy hafa. Ny peptide oyster dia afaka manatsara ny fahasalaman'izy ireo ara-nofo.
Ny hery ao ambadiky ny fahaiza-manatsara ara-pahasalamana ny peptide oyster dia ny votoatiny avo momba ny zinc, satria mihevitra fa ny oyster no manankarena indrindra amin'ny zinc. Ny votoatin'ny zinc amin'ny oyster dia avo folo heny noho ny hena mena.
Ara-tsiantifika, ny zinc dia voaporofo fa manatsara ny haavon'ny testosterone maimaim-poana amin'ny olona iray. Etsy ankilany, ny tsy fahampian'ny zinc no antony voalohany mahatonga ny olana ara-nofo amin'ny lahy toy ny tsy fihanaky ny erectile. Izany dia satria tsy ampy zinc izy ireo hamokarana testosterone hamporisihana sy hitazomana ireo toetra faharoa amin'ny lehilahy. Amin'ny ankapobeny, ny lehilahy ambany testosterone dia miaina libido ambany sy fanaovana firaisana ara-nofo.
Ho fanampin'ny zinc, ny sisan'ny oy dia ahitana otrikaina D betsaka ihany koa, otrikaina hafa izay manampy ny vatan'ny lehilahy iray hamokatra testosterone bebe kokoa. Manatsara ny hery sy ny hozatra ihany koa izy io.
Ankoatr'izay, ny peptide oyster dia manankarena amin'ny arginine, ny singa mandoko ary ny selenium koa, izay samy manana ny lanjany lehibe amin'ny famokarana sperma. Vokatr'izany dia lehilahy iray izay mampiasa an'io vokatra oyster io dia mahatsapa fa mihatsara ny fihobiana.
Ka, rehefa maka lehilahy peptide oyster, ny haavon'ny testosterone sy ny famokarana sperma dia mitombo, ka manatsara ny fahasalamany ara-pananahana izany. Noho ny tanjaky ny vatana amin'ny ankapobeny ary ny fitomboan'ny testosteron, ny lehilahy dia manana libido haingana kokoa ary mihabe. Azony atao koa ny mitazona fiomanana mandritra ny fotoana maharitra.
Ankoatra ny fametavetana sy ny maha-impotence, dia fanafody mahomby ihany koa amin'ny toe-piainana lehilahy toy ny prostate sy ny hypoplasia ara-pananahana. Izany no antony nanakanana ny sôkôro, indrindra indrindra ny psteride oyster, izay efa nampiasain'ny lehilahy an-jatony taona maro-ho an'ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny lehilahy.
Ny fiantraikan'ny fatran'ny péstida poody iray dia mety maharitra mandritra ny fito na folo andro. Midika izany fa ny lehilahy iray dia tsy mila mandray ny fanampiny isan'andro ho azy hahazo tombony amin'ny fanatsarana ara-nofo. Manodidina ny 12 ora eo aorian'ny fisakafoanana dia manomboka mahatsapa hery kokoa ny lehilahy iray ary manaitra ny hanao firaisana.
Ny peptide Oyster dia tombontsoa ho an'ny vehivavy
Iray amin'ireo tombon-tsoa lehibe amin'ny peptide oy ny ankapobeny fanatsarana hery amin'ny vatana. Toy izany, rehefa misy vehivavy miatrika antepartum na fahalemen'ny postpartum dia maka izany fanampin-javatra izany dia mahatsiaro ho matanjaka kokoa izy.
Ankoatr'izay, toy ny lehilahy, ny vehivavy dia mahatsapa fahasalamana ara-pananahana tsara kokoa taorian'ny fisotroana peptide oyster. Ny vatan'ny vehivavy iray dia miteraka testosteron nefa amin'ny atody.
Na izany aza, mazàna ny vehivavy menopausal dia mampihena ny haavon'ny hormonina, ary vokatr'izany dia mihinana libido ambany sy maina ny fivaviana.
Soa ihany, ny famatsiana fanampiny zinc amin'ny peptide oyster dia mampitombo ny haavon'ny testosterone menopausal. Ny vokatr'izany dia fitomboan'ny firaisana ara-nofo sy ny fivaviana 'lubricated' tsara kokoa. Raha izany no izy dia ho afaka hankafy firaisana ara-nofo tsara kokoa.
Inona avy ny tombony azo amin'ny peptide Oyster raha ampitahaina amin'ny vokatra fampivoarana ara-pananahana hafa?
Tsy toy ny ankamaroany fampivoarana ara-pananahana vokatra, ny peptide oyster dia tsy misy fiatraikany satria voajanahary daholo izany. Ankoatr'izay, tsy voatery maka izany isan'andro ny olona iray, toy ny vokatra hafa fampivoarana ara-pananahana. Ny fiantraikan'ny dosage peptide iray dia afaka maharitra mandritra ny fito ka hatramin'ny folo andro.
Ny fizotran'ny fitrandrahana Oyster Peptide
Ireto misy dingana manaraka nalaina haka peptide oyster avy amin'ny henan'omby.
Dingana voalohany: Fitsaboana ny hena amin'ny sira kalsioma
Ny henan'omby dia tany miaraka amin'ny sira calcium sy rano. Izany dia mitondra henan-jaza heniky. Ny dingana dia natao hamolavola sy famoahana ireo angovo endogen ao anaty ozit. Vokatr'izany, ny fiomanana amin'ny fiantraikan'ny enzimma izay tafiditra amin'ny hydrolysis ho avy dia ho kely kokoa.
Dingana 2: hydrolysis enzim-boly
Ny slurry hena oyster novokarina tamin'ny dingana voalohany dia iharan'ny hidolisisma anzima. Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny fanentanana ny slurry hatramin'ny 35 ° C ka hatramin'ny 45 ° C mandritra ny adiny iray na roa. Avy eo, ny anzima proteinina tsy miandany na koa ny protease alkaly dia ampidirina ao amin'ny slurry. Ny mari-pana dia niova ho 50 ka hatramin'ny 60 ° C mba hitohizan'ny hydrolysis mandritra ny dimy ka hatramin'ny valo ora.
Aorian'izany, ny pH dia amboarina amin'ny 5.0 hatramin'ny 5.5, ny tambavy protease dia ampiana ary avela hidina mandritra ny roa na telo ora roa ny hydrolysis enzim-pianarana. Avy eo, ny vokatra azo avy amin'ny supernatant dia voatokana ho entona ranom-boay manta.
Dingana 3: Fanalefahana sy fanadiovana ny fanaingoana
Ny karbonina nihetsiketsika dia ampidirina amin'ny ranom-boay mofomamy ao amin'ny dingana roa. Ny fifangaroana dia manindrona amin'ny hafanana manomboka amin'ny 45 ° C ka hatramin'ny 55 ° C mandritra ny 30 ka hatramin'ny 60 minitra. Avy eo, dia ahosotra sy hakana azy ilay membra seramika. Ny filtrate vokatr'izany dia izay resahintsika ho vahaolana fanadiovana peptide oy.
Dingana 4: fifantohana sy fanadiovana rano
Ny vahaolana péstéro voadio dia mifantoka amin'ny farafahakeliny 35% farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny fivorian'ny vakoka. Avela avy eo izy ireo mba hamokatra peptide matavy izay tsara sy tsy tsara fofona mahatsiravina.
Ahoana no maka ny vovobony peptide Oyster? Dosage peptide Oyster?
Manana safidy roa ianao amin'ny fanalana vovoka peptide oy. Ny voalohany dia amafazany azy ao anaty tavoahangy misy rano iray arakaraka ary misotro ny fifangaroana. Raha izany, dia azonao atao ny manala azy ary misotro rano mba hampandrasana azy ao anaty vavoninao.
Tsy misy fatra azo hamaritana ny peptides bioaktif. Ny salanisan'ny dokotera sasany anefa dia 500 mg, avo telo heny isan'andro. Na izany aza, satria sakafo voajanahary voajanahary sy azo antoka izany, dia azonao atao ny manamboatra ny fatra amin'ny ambony na midina, arakaraka ny filanao.
Vokatry ny Peptide an'ny Oyster
Tsy misy vokatsoa voaporofon'ny siansa voan'ny peptide ozy na otrikaretina péstro. Ity no antony indrindra satria ny vokatra dia voajanahary tanteraka, ary tsy misy zava-maniry hanitra voajanahary na manimba.
Na izany aza, ny olona manana alika amin'ny hazan-dranomasina dia mety hisedra olana ara-pahasalamana taorian'ny fitrandrahana ny katsaka. Noho izany, ny olona iray izay mijaly noho ny allergy amin'ny hazan-dranomasina dia tokony hisoroka ny vokatra oyster, anisan'izany ny peptide.
Ary koa, ny olona manana olana ara-pahasalamana efa misy mialoha dia manoro hevitra mba hiresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamany, alohan'ny hanombohanao maka ireo vokatra ireo. Hanampy azy ireo izany hisorohana ny voka-dratsy mety hitranga ao anaty fifaneraserana eo amin'ny fakana angady sy ny fanafody hafa mety alain'izy ireo.
Ankoatr'izay, ny sasany mivoaka ny toe-pahasalamana dia mety hiharatsy miaraka amin'ny famatsiana zina fanampiny ao amin'ny vatana.
Oyster Peptide Powder fampiharana
Noho ny fiantraikany eo amin'ny pharmacological dia ny vovon-péterika péroida izay ampiharina amin'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana. Ohatra, noho ny angon-drakitra manan-danja ara-pitsaboana manamafy ny fahaizan'ny olitra hanaporofo ny serum ao amin'ny lehilahy, dia maro ny lehilahy manana olana ara-pahasalamana ara-pahasalamana.
Manampy izany, ny vovony voajanahary dia ampiasaina ho an'ny régitation amin'ny ranon-dra sy ny fampiatoana ny “platelet aggregation”. Aretina ihany koa ho an'ny olona voan'ny soritr'aretina hyperglycemia, tsy fahampiana tsimokaretina na metabolism malemy satria manatsara ny toe-pahasalamana.
Ny olona voan'ny homamiadana dia mety haka ny vovony ho fitantanana tsara kokoa an'io aretina io. Ny vokatra oyster dia afaka manakana ny sela homamiadana tsy hitatra. Ny vovony dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny fanasitranana ratra sy ny fanatsarana hery fihetsiketsika amin'ny famokarana herinaratra.
Ny fampiharana hafa amin'ny vovony peptide oyster dia misy:
Fanatsarana ny maso
Mahazo tombony amin'ny fanoherana ny adin-tsaina
Toy ny fanafody ho an'ny glandes forandela
Faniriana be loatra amin'ny fisorohana
Ankoatra izany, azonao atao ny mampiasa vovoka peptide oy ho toy ny additive sakafo. Mahafinaritra izany ary tsy manitra ny 'trondro' toy ny vokatra sasany amin'ny hazan-dranomasina. Ankoatr'izany, manan-karena amin'ny otrikaina ilain'ny vatanao ny fahasalamana. Ny toy izany dia mety ho famenoana tsara ho an'ny sakafo mahazatra anao.
O psterides Oyster, sôkôlà ny oyster, dia fanampina azo antoka azo ampiasaina amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany. Iray amin'ireo tombontsoa dia ny fanatsarana fiasa amin'ny lahy. Ireo peptides ireo dia mety mampitombo ny libido ao amin'ny lehilahy iray miaraka amin'ny mpivarotra firaisana ara-nofo ary ny fanisana amin'ny sperm ho an'ireo lehilahy manana olana amin'ny tsy fahampiana. Ny vehivavy menopausal miaina fanamoriana firaisana ara-nofo sy ny maina ny fivaviana dia mety hahazo tombony betsaka amin'ny fitrandrahana peptide.
Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., & Zeng, M. (2013). Ny fanamasinana sy ny toetran'ny peptide mifatotra zinc avy amin'ny hydrolyzate proteinina oyster. Gazety amin'ny sakafo miasa, 5(2), 689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Vokatry ny fiarovana ny peptide antioxidative nodiovina tamin'ny fihinana gastrointestinal an'ny oyster, Crassostrea gigas manoloana ny fahasimban'ny ADN radika maimaimpoana. Teknolojia Bioresource, 99(9), 3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., & Balasubramanian, T. (2014). Fihetseham-po antioxidant sy vokatry ny peptide bioactive avy amin'ny hydrolyzate enzimanta an'ny oyster (Saccostrea cucullata). Biomedinika sy sakafo mahavelona, 4(3), 343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). Fangatahana Patent amerikanina No. 15 / 542,743.
Zeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). Peptide mavitrika Antiviral avy amin'ny oyster. Gazety Shinoa momba ny Oceanology sy Limnology, 26(3), 307-312.